မန်စီးတီးကနေ ဒေါ့မွန်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာ မှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆန်ချို – Myan Ball
မန်စီးတီးနဲ့ ဝက်ဖို့ဒ် လူငယ်အသင်းမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျာဒန်ဆန်ချိုက ဒေါ့မွန်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုလို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်ကစားသမား ဆန်ချိုဟာ ဒေါ့မွန်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အတွက် အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
” အမိနိုင်ငံကနေ ရွှေ့ပြောင်းသွားတဲ့ ကစားသမားတိုင်း အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ပြည်ပမှာ ကစားဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာလို့ ပြည်ပမထွက်ဘဲ နေမှာလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ထွက်ကစားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဂျာမနီကို ပြောင်းရွှေ့ကစားလို့ မတုန်လှုပ်ပါဘူး။ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမားဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကာလရှည်ရည်မှန်းချက်ပါ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစုပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ရမှာပါ။ မိသားစုနဲ့ခွဲရတော့ အမေနဲ့ အစ်မတွေကို အရမ်းလွမ်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေ့ကို အရမ်းလွမ်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ရင် ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ရမှာပါ။ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ခေါ်ယူခံရတာ ကျွန်တော့်လို လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပါ”လို့ ဆန်ချိုက ပြောပါတယ်။ ဆန်ချိုဟာ ဒီရာသီ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြိုင်ပွဲမှာ ဒေါ့မွန်အတွက် ၇ ပွဲကစားရာမှာ ၁ ဂိုးသွင်းပြီး ၆ ဂိုး ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျာဂန်ကလော့ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဝက်စ်ဘရွန်း ကွင်းလယ်လူ
ခရစ်တီယာနိုရော်နယ်ဒိုလိုကစားသမားမျိုးကိုမင်းဘယ်လိုအစားထိုးမှာလဲ ၉ ရာသီဆက်တိုက် ၁ ရာသီကိုပျမ်းမျှဂိုး ၅၀ သွင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမင်းဘယ်လိုအစားထိုးမှာလဲ ? ငါတို့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်, ရော်နယ်ဒို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ၃ နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ရော်နယ်ဒိုမရှိတဲ့နောက် ဒုတိယနေရာသို့လျောကျသွားခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ ရော်နယ်ဒိုမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းယူနိုက်တက်ဟာအခက်အခဲတွေကိုသင်ယူခဲ့ရတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြန်တယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက် ပွဲပေါင်း ၄၃၈ ပွဲကစားခဲ့ရာတွင် […]
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အပြောင်းအရွှေ့ စာမျက်နှာထက်မှာ လူကာဂျိုဗစ်ဆိုတဲ့ နာမည်က ပရိသတ်တွေရဲ့ မျက်လုံးထဲ ဖမ်းစားထားမှာ သေချာပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဆွာရက်ဇ်ရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ဘာစီလိုနာအသင်းက စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဖရန့်ဖတ်အသင်းရဲ့ အဆိုပါ ဆာဘီးယားတိုက်စစ်မှူး ကို လက်ရှိအချိန်မှာ […]
ဘာစီလိုနာ ချဲလ်ဆီးအသင်းတို့ရဲ့ ပစ်မှတ် လူကာဂျိုဗစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုတိုက်စစ်မှူးမျိုးလဲ ???
မန်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ဒေါ့မွန်လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဂျော်ဒန်ဆန်ချိုကို ၀ယ်ရန် ငွေအလုံးလိုအပ်သောကြောင့် အသင်းရဲ့ ကစားသမားနှစ်ယောက်အား ရောင်းချပြီး ငွေရှာဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကစားသည် ဒေါ့မွန်အသင်းနဲ့ ဒုတိယရာသီစွမ်းဆောင်ရည်မှာ အထူးကောင်းမွန်နေပြီး ၄င်းသည် မန်စီးတီးအသင်းမှာ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လမှ ရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ချိုရဲ့ တန်ဖိုးမှာ […]
အံ့ဖွယ်လူငယ်ကစားသမားလေး ဂျော်ဒန်ဆန်ချိုကိုဝယ်ဖို့ အသင်းရဲ့ ကစားသမား နှစ်ယောက်ကို ရောင်းထုတ်မယ့် မန်ယူအသင်း
ဒီရာသီမှာ ဒေ့ါမွန်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြလျက်ရှိတဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေက စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူနိုင်မယ့် အသင်းအဖြစ် ဘွတ်ကီဒိုင်တွေရဲ့ အလေးပေးမှု အများဆုံးကို ရရှိထားပါတယ်။ အဆိုပါ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ […]
ဆန်ချိုကို ခေါ်ဖို့ ဆန်းချက်ဇ်နဲ့လူကာကူကို ယူနိုက်တက်တို့ လက်လွှတ်တော့မှာလား ???